Shacabka Media | Gaas: Fiiri xukuumadihii iga horeeyay M/wayne Xajka tagay isaga oo xil haya ma jirin anaa ugu horeeya. Taasi waxqabadka xukuumadayda lagu xusuusan doono ayey ka mid tahay
Wariye: Xaaji Madaxweyne Ilaahey waa ku soo nabad celiyey.
Gaas: Haa hey, safar najaxay buu ahaa.
Wariye: Mudane Madaxweyne bal safakaagi dadka reer Puntland ku daawanaya uga warbixi?
Gaas: Safarka arimo badan horumarka Puntland dani ugu jirto baanu ku soo qabanay. Sida u ogtahay balan qaadka reer Puntland aan u galnay eyay ahayd in Xajka aan tago.
Wariye: Soo madaxwayne Xajku waajiba aad soo gudatay ma aheen see Puntland ugu balan qaaday?
Gaas: Fiiri xukuumadihii iga horeyay Madaxwayne Xajka tagay isaga oo xil haya ma jirin anaa ugu horeeya. Taasi waxqabadka xukuumadayda lagu xusuusan doono ayey ka mid tahay in dadku isku tashto horaan u sheegnay.
Wariye: Madaxweyne waxa moodaa su'aashayda sibaa uga leex leexanaysaa, Hajku waajib soo kuguma ahayn?
Gaas: Haa dabcan laakin xiligaan ku beegnay si farsamaysan baanu u dhignay faham.
Wariye: Go'aankii khilaafka Khaliijka Puntland ay ka qaadatay hadii halkan press-release ka sii daysan safarkiina ka hor arinkaa Boqortooyada Saudi Arabia ma soo dhawaysay?
Gaas: Good question, nasiibdaro waraaqdii press-release go'aankeena xambaarsanayd iyada oo wali Saudi Arabia gaarin baan anagu gaarnay oo anagaa warqadii ka hormarnay.
Wariye: maxaa dhacay markaa, arinku sidee buu noqday?
Gaas: Maxaa dhici lahaa afkaan uga sheegnay.
Wariye: Mudane Madaxweyne, hadii mooqifkina afka ka cadeyseen ma la idin soo dhaweeyay oo si diiran ma la idin sooryeeyay?
Gaas: Maya taas ma dhicin oo kadisay ku noqotay arin ay ka sii tabaabushaysteen ma ahayn, oo xitaa hadii nala sooryen lahaa ma anigaa media ka sheegi lahaa xogaagii DP WORLD ka soo qaadnay wixi naga raacay cashar nooku filan kkk.
Wariye: Madaxweyne iyada ka waran waajibaadkii Hajka Kabcada iyo dhagax tuurkii?
Gas: Taas record baanu ka soo samaynay Kabcada iyada 5 jeer baan ku soo wareegay u malayn mayo kuwii horeeyay iska dhaaf madaxweyne iga dambeeya record kaa soo dhigay ma jabin doono. Dhagaxtuurka shaydanka isagu dhagax dixeed aan Garowe ka sii qaatay baan la soo dhacay nin wax ku nool ma ahayn.
Wariye: Fariid Madaxwayne mahadsanid.
Gas: Sidoo kale.
Waa Waraysi Kaftan ah
Shacabkamedia:Runta Kama Xishoono